चिसोबाट बच्नका लागि यी व्यक्तिले २१ करोड रुपैयाँको आगो तापे, वार्षिक एक खर्ब मुसाले खाइदिने
संसारभरीका धनी व्यक्ति यस्ता पनि हुन्छन् जसले आफ्नो पैसा यस्ता अनावश्यक काममा खर्च गरेका छन् जुन सुन्दा चकित पर्नुहुन्छ तपाईं । यस्तै एक धनी व्यक्तिमा समावेश छन् पाब्लो एस्कोबार । कोकिन किंगको नामले चर्चित र विश्व नम्बर एक–वन डन पाब्लो एस्कोबारले आफ्नो परिवारलाई चिसोबाट बचाउनका लागि करोड डलरको रकममा आगो लगाइदिएका थिए । सन् १९८९ ..
सांसदले वयस्कलाई मुखको सहायताले ‘सेक्स टोय’ मा कण्डम राख्ने तरिका सिकाएपछि…
एक झुण्ड वयस्कको अगाडि ‘सेक्स टोय’ मा मुखको सहायताले कसरी कण्डम राख्ने भनेर देखा..
विमान भित्र खिचिएका अचम्मका तस्बिरहरु, देखेपछि हाँसो रोकिँदैन
सन् १९१४ को फेब्रुअरी १६ तारिखमा लस एन्जलस र सान प्रान्सिस्कोबिच पहिलो फ्लाइटले ..
यस्ता तस्वीर देख्नुभएको छ ?
सामाजिक संजालमा आजकल रमाइला तस्वीर आउने गरेका छन् । तपाईहरुले यस्ता तस्बीर देख्न..
आमाको गर्भमा यसरी हुर्कन्छ बच्चा, फोटोग्राफरले देखाए ९ महिनाको यात्रा
संसारमा यस्ता थुप्रै कुराहरु हुन्छन् जसलाई हामी देख्न पाउँदैनौं । तर यस्ता फोटोग..
२ हजारको नोटले कारलाई बेहुलीजस्तै सिंगारिएको खबरको वास्तविकता यस्तो
भ्यालेन्टाइन डेको दिनमा आफ्नी प्रेमिकालाई प्रभावित गर्नका लागि एउटा कारलाई दुई हजारको नोटको सजाएको र पुलिसले उक्त कारलाई देखेपछि ती व्यक्तिलाई पक्राउ गरेको भन्दै फोटोसहित एक खबर सोसल मिडियामा खुबै भाइरल भयो । फोटोलाई निकै घोरिएर हेर्ने हो भने कारको प्रत्येक भागमा दुई हजारको नोट टाँसिएको छ । कार वास्तवमा कुन रङको छ, त्यो थाहा [&h..
सय रुपैयाँको विवाह यसरी बन्यो ३७ लाखको भव्य विवाह समारोह
केन्याका एक जोडीले पछिल्लो महिना बाध्यतावश १०० केन्यन सिलिङ (१ सय ३ रुपैयाँ) मा आफ्नो विवाह गरेका थिए । गरिबीका कारण उनीहरुले आफ्नो विवाहलाई धेरैपटक सार्नु परेको थियो । यद्यपी, भ्यालेन्टाइन डे मा यो जोडीको चर्चा निकै फरक कहानीको लागि भइरहेको छ । यो जोडीका शुभचिन्तकहरुले चन्दा उठाएर यस्तो भ्यालेन्टाइन डे मनाए जसले १ सय […]
भ्यालेन्टाइन डे लाई विशेष बनाउनका लागि कोही जोडीले सबै हद पार गर्ने गर्दछन् । आफ्नी प्रेमिकालाई प्रभावित गर्नका लागि एक प्रेमीले विभिन्न प्रकारको उपहार र फूल दिने गर्दछ । प्रेमिकालाई खुसी तुल्याउनका लागि प्रेमीले भिन्न तरिका अपनाउने गर्दछ तर एक प्रेमीको यस्तो व्यवहारले उनलाई जेल पुर्याएको छ । मुम्बईका एक प्रेमीले आफ्नी प्रेमिकाल..
एकै परिवारको पाँच सय सदस्यको निकै दुर्लभ पुर्नमिलन
एक चीनियाँ परिवारको पाँच सय सदस्यको निकै दुर्लभ पुनर्मिलन भएको छ । उनीहरुको यो ऐतिहासिक पुर्नमिलनलाई जीवन्त राख्न फोटोसमेत खिचिएको छ । रेन परिवारको पुनर्मिलन चीनको सिसे गाउँमा भएको थियो । उक्त तस्बिर पूर्वी प्रान्त झेजियाङमा खिचिएको हो । गत हप्ता चीनियाँ नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा यो परिवारको पुनर्मिलन भएको हो । फोटोग्राफर झाङ लिया..
KISSING का यस्ता तस्बीर देख्नुभएको छ त ?
काठमाडौं– सोसलसाइटमा अहिले यस्ता तस्वीर भाइरल भएका छन्, जो तपाईंले विगतमा कहिल्यै देख्नुभएको छैन । यी तस्वीर हेर्नुभयो भने तपाईंलाई लाग्ने छ, होइन यी मानिसहरु किसका लागि पनि कति धेरै फुर्सद निकाल्छन् । हेर्नुहोस्, १० तस्वीर
गोहीको मुखभित्रबाट जेब्राको टाउको देखिँदाका अद्भूत पल (फोटोफिचर)
एक फोटोग्राफरले गोहीको मुखभित्र जेब्राको टाउको निस्किरहेको निकै डरलाग्दो तस्बिरलाई आफ्नो क्यामराको लेन्सभित्र अटाएका छन् । केन्याको मसाई मारा नेशनल रिजर्भमा एउटा गोहीले आफू बराबरको जेब्रा खाएपछि गोहीको शरिर फुलेर अझै भयानक देखिएको छ । मुखभित्रबाट निस्किएको जेब्राको टाउकोलाई उक्त गोहीले अर्को गोहीसँग बचाउन कसरत गरिरहेको देख्न सकि..
एउटा यस्तो विज्ञापनः ‘नग्न भएर काम गर्ने महिला कामदार चाहियो, घण्टाको ६ हजार बढि तलब’
लण्डनको ‘नेचुरिष्ट क्लिनर्स’ नामक कम्पनीले नग्न भएर घर सफा गर्ने महिला कर्मचारीको खोजी गरिरहेको छ । नीजि घरमा सफा गर्नका लागि ती महिला कामदारले चप्पल र सफा गर्ने पञ्जाबाहेक अरु केही लगाउन पाउँने छैनन् र यसो गरेबापत् उनीहरुलाई घण्टाको ५७ डलर (रु. ६ हजारभन्दा बढि) दिइने छ । यसका लागि जुनसुकै उमेर समूह र आकारका […]
यो समाचार पढ्दा लाग्छ कि दन्त चिकित्सक बन्न निकै सजिलो छ । मलेसियाको क्वातानका २५ वर्षीय मोहम्मद इर्वान मोहद सुदीले युट्युब भिडियो र दाँतसँग सम्बन्धि म्यागजिन पढेरै आफ्नो क्लिनिक खोलेका छन् जसमा उनले उपचारका विभिन्न पद्धती अपनाउने गर्दछन् । लाइसेन्सधारी दन्त चिकित्सक बन्नका लागि ६ वर्ष डेन्टल स्कूलमा पढ्नुको साटो उनले दाँत निकाल..
महिलाको टाउको भित्रबाट डाक्टरले निकाले जिउँदो साङ्लो
चेन्नईमा डाक्टरको समूहले एक महिलाको टाउको भित्रबाट जिउँदो साङ्लो शल्यक्रियामार्फत निकालेका छन् । स्टान्ली मेडिकल कलेज अस्पतालको इएनटी डिपार्टमेन्टका प्रमुख डाक्टर एमएन शंकरले यस्तो घटना आफ्नो ३० वर्षे करियरमा पहिलो भएको बताएका छन् । द न्यू इन्डियन एक्सप्रेसके एक रिपोर्ट अनुसार ४२ वर्षीया सेल्वी नामकी महिला पेशागत रुपमा घरेलु काम..
त्यस्ता ९ फोटोः जस पछाडिको कहानी निकै डरलाग्दो छ
फोटो, पुराना यादहरुलाई संग्रह गर्नका निमित्त खिचिन्छन् । धेरैजसो हामी रमाइलो क्षणमा फोटो खिच्न मन पराउँछौं तर कुनै फोटो यस्ता हुन्छन् जसको पछाडिको कहानी निकै डरलाग्दो हुन्छ जसले सबैको मुटु कपाउँछ । आज हामी तपाईंलाई त्यस्तै फोटो देखाउँदै छौं । रुसमा बस्ने २२ वर्षीया जूलिया पोपोवको यो तस्बिरले निकै भयानक देखिन्छ । सन् २००८ मा [&he..
महिलाले बाथरुममा खिचे यस्ता तस्बिर, हेर्दा हेर्दै भयो भाइरल
हुन त संसारका धेरैजसो महिला सेल्फीका लागि सधैं तयार रहन्छन् । तर कोहीमा सेल्फीको भूत यति धेरै सवार हुन्छ कि उनीहरुले आफ्नो फोटो खिच्न सबैभन्दा नीजि स्थान बाथरुम पनि छोड्दैनन् । आज हामी तपाईंलाई यस्तै फोटो देखाउँदैछौं ।
निकै दुर्लभ यो कुखुराको प्वाँखमात्र होइन, भित्री अंग, हड्डीसमेत कालो (फोटो)
आयाम सेमानी नाम दिइएको यो कुखुरा इन्डोनेसियामा मात्र नभई संसारभरीको रहस्यमयी प्रजातीको रुपमा उभिएको छ । यो निकै दुर्लभ कुखुराको टाउकोदेखि खुट्टासम्मको हरेक अंग कालो छ । यो कुखुराको बाहिरी अंग मात्र नभई भित्रि अंग र हड्डीसमेत कालो छ । फिब्रोमेलानोसिसका कारण यो कुखुराको तन्तुमा अतिरिक्त मेलानिन उत्पादन हुन्छ जसले कुनै हानी नगरी कु..
महिलाको कानको प्वालमा अजिंगर फसेपछि…
अमेरिकाको राज्य ओरेगनमा बस्ने एक महिलाको एक घर पालुवा अजिंगर उनको कानको प्वालबाट निस्कने कोसिसमा प्वालभित्रै फसेको छ । ऐशली ग्लाईले आफ्नो फेसबुकमा आफ्नो तस्बिर पोष्ट गरेकी छिन् जसमा उनको कानको प्वालभित्र पाइथन अड्किएको देख्न सकिन्छ । फोटो पोष्ट गर्दै उनले लेखेकी छिन्, ‘अहिलेसम्मको मेरो सबैभन्दा पागलपनले भरिएको स्थिती । मेरो पाइथ..
के यिनीहरु विश्वकै सबैभन्दा रिसाहा जनवार हुन् ? (फोटोफिचर)
काठमाडौँ – इन्टरनेटमा घरपालुवा जनवारहरुको तस्विर खोज्ने हने निकै प्यारा र सुन्दर तस्विरहरु पाउँछौँ । तर, बोर्ड पाण्डाले भने घरपालुवा जनावरहरुको यस्तो तस्विरहरु संकलन गरेको छ जसमा घरपालुवा जनवारहरुको यस्तो तस्विहरु देखाइएको जसमा उनी निकै रिसाएको अवस्थामा छन् । हेरौँ केही तस्विरहरु :
फेरि बच्चा पाउन नसक्ने भएपछि आमाले प्रेमीलाई १४ वर्षीया छोरीलाई गर्भवती बनाउन लगाइन्
लण्डन – अपरेसन गरेर परिवार नियोजन गरेकी एक महिलाले बच्चा पाउन आफ्नो प्रेमीलाई आफ्नो १४ वर्षीया छोरीलाई बलात्कार गर्न लगाएकी छिन् । आमाको प्रेमीले ती किशोरीको वर्षौँसम्म यौनशोषण गरेर गर्भवती बनाएको अदालतको दस्तावेजमा उल्लेख छ । छोरी गर्भवतीपछि ती जोडीले आफ्नो छोरी एउटा पार्टीको दौरान अन्य किशोरबाट गर्भवति भएको बताएका थिए । उनीहरु..
यी टीवी स्टारले भनिन्–फुर्सदको समयमा बेश्यावृति गर्छु
सर्वियाकी रियालिटी टीवी स्टार सेनाडा नुर्किक आफ्नो पछिल्लो अभिव्यक्तिले संसारभर चर्चामा छिन् । २४ बर्षका सेनाडाले खुलासा गरेकी छिन कि उनले खाली समयमा बेश्यावृति गर्छिन । उनले यो पनि भनेकी छिन कि, उनी सुन्दर पुरुषसँग मात्र सम्बन्ध बनाउँछिन् । हाई प्रोफाइल राजनीतिज्ञ उनका ब्वाय फ्रेन्ड छन् । सर्वियामा बेश्यावृतिको काम गैरकानुनी मा..
आमाको पेटभित्र आफूलाई नै कुटिरहेको देखिए शिशु, अल्ट्रासाउण्डमा देखियो यस्तो
नजन्मिँदै यी शिशुले आफ्ना आमा बुवालाई तनावमा पारिदिए जब उनले आफूले आफैंलाई टाउको बेस्सरी हिर्काए । यो भिडियो युट्युबमा सन् २०१६ को फेब्रुअरी ८ तारिखमा राखिएको हो जसलाई साढे चार लाखभन्दा बढि मानिसले हेरिसकेका छन् । हेरौं भिडियो ।
चुम्बन गरेपछि भयो यी युवतीको मृत्युः यस्तै ५ डरलाग्दा घटना
प्रेममा डुबेका जोडीका लागि एक अर्काको साथ निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । सबैसँग लुकिछिपी भएपछि प्रेम गर्ने जोडी एक अर्कालाई एक्लै भेट्न निकै लालायित हुन्छन् । मौका पाएको अवस्थामा निकै खुसी पनि । एक्लै हुँदा आफ्नो प्रेम व्यक्त गर्न जोडीले एक अर्कालाई अंगालो हाल्ने, चुम्बन गर्नेजस्ता व्यवहार गर्न सक्छन् । तर यहि निकटता कसैको मृत्युको कार..
साउदी अरबका राजकुमारले ८० बाजका लागि विमानको सीट बुक गराएपछि हंगामा
साउदी अरबका राजकुमारले आफ्ना ८० वटा बाजका लागि विमानमा सीट बुक गराएका छन् । फ्लाइट क्याप्टेनले यो फोटो इन्टरनेटमा हालेपछि सोसल मिडियामा हंगामा भएको छ । उक्त फोटो रातारात भाइरल पनि भयो । स्मरण रहोस् खाडी देशमा बाजलाई मानिस सरह सम्मान दिइन्छ । – साउदी अरबसमेत थुप्रै देशमा बाजविरुद्ध भेदभाव रोक्नका लागि कानून पनि बनाइएको […]
१ करोड ९४ लाख मतदातासँग शारिरिक सम्पर्क गर्ने बाचा गरेकी मोडल भन्छिन्, ‘४ सयसँग नै थाकिसकें तर बाचा पूरा गर्छु’
भोट हाल्ने १ करोड ९४ लाखसँग शारिरिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने बाचा गरेकी इटालीकी एक मोडलले पहिलो ४ सय जनासँग नै थाकिसकेको बताएकी छिन् । यद्यपी उनले यो बाचा कम्तीमा पनि १० लाख मानिससँग पूरा गर्ने अर्को प्रतिबद्धता व्यक्त गरेकी छिन् । पाओला साउलिनो, २७, ले आफूलाई ‘बचनका पक्का’ भएकी महिलाको रुपमा प्रस्तुत गर्ने कुरामा प्रतिबद्ध [&helli..